Tababare App Android - 1 click si loo soo dajiyo barnaamijyadooda Android ka PC for free
> Resource > Android > Android Manager App: 1 Click to rakib Android Apps ka PC for Free
Xitaa sida ku cusub tahay arrimaha suuqa hawlgalka nidaamka, Android uu noqday mid ka mid ah dhufto ee ugu mobile hadda la heli karo. Ka sokow qalabka Apple, waxa ay sidoo kale wax aad iyo aad hip in ay leedahay telefoonka ah Android ama kiniin. Si kastaba ha ahaatee, dadka isticmaala badan oo ka codsanaynaa su'aal isku mid online: "sida loo rakibi app ee kombiyuutarka si ay Android?", Ama "waxaan gelin karaa app in aan telefoonka Android ka kombiyuutarka?". Ha ii kuu sheegi: HAA! Waxaad ku rakiban kartaa codsiyada Android in aad telefoonka ka computer 1 click oo lacag la'aan ah.
Ku rakib barnaamijyadooda Android ka PC for free
Si aad u rakibto codsiyada Android ka PC, waxaad u baahan tahay oo ah tababaraha app Android marka hore. Wondershare MobileGo for Android waa tababare oo caynkaas ah Android app, kaas oo kaa caawin kara inaad soo dajiyo barnaamijyadooda ka computer, barnaamijyadooda uninstall ka Android ama dhoofin barnaamijyadooda aad ka Android si aad u computer, iyo sidoo kale sida maamuli lahayd Xiriirada, SMS, filimada, muusig iyo sawiro. Dadka isticmaala Mac, fadlan isku day Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) .
Fiiro gaar ah : In qayb ka mid ah in yimaado, waxaan jeclaan lahaa inaan idiin sheego sida loo soo dajiyo iyo barnaamijyadooda uninstall on Android la version Windows - Wondershare MobileGo for Android. Haddii aad isticmaalayso computer Mac ah, fadlan kala soo bixi Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac). Tutorial ayaa ka mid ah laba nooc oo la mid yihiin.
Burcad MobileGo for Android. Connect telefoonka Android ama kiniin in kombiyuutarka adigoo isticmaalaya cable USB ama via Wi-Fi. Markaas, guji "Apps" menu galeeysid bidix.
Guji "rakib", iyo dooran faylasha APK on your computer. Waxaad dooran kartaa mid ka badan hal mar, ka dibna ku dhuftay "OK". Faylasha ayaa loo gudbin doonaa si aad Android mid mid.
Uninstall Android Apps ka PC
Haddii aadan rabin in mar dambe u isticmaali lahaayeen barnaamijyadooda qaar ka mid ah aad Android, waxaad dooran kartaa in si toos ah iyaga uninstall halkan. Dooro barnaamijyadooda ka, ka dibna riix "uninstall". Chine ayaa gebi ahaanba laga saari doonaa telefoonka Android / kiniin.
Dhoofinta Android Apps in PC
Sidoo kale, waxaad u dhoofin karaan barnaamijyadooda aad on your Android inay Kombiyuutarka oo in gurmad ama isticmaalka on Android telefoonada / kiniinno kale. Just doortaan barnaamijyadooda iyo guji "Dhoofinta". Markaas barnaamijyadooda loo taageeray doonaa on your computer, oo waxaad iyaga la qaybso qoyska ama saaxiibbada karo.
Intaa waxaa dheer, tan Tababaraha Android kaa caawin karaan si ay u gudbiyaan iyo dib aad xiriirada, SMS iyo waxyaabaha kale ee multimedia. Waxaad shuqulka oo dhan lagu effortlessly arrintan Android Manager samayn karaa.
Daawo video ah oo isku day in aad naftaada.
3 Siyaabaha kaabta iyo Soo Celinta Android Phone Effortlessly
Screen Ciidamada Android: 1 click la Sameeyo Ciidamada Screen on Android
Lugood u Android: Maamul Your Tusmada Android Effortlessly
Sida loo Download Music on Android u Free
6 Waxyaabaha aad u baahan tahay inaad ogaatid oo ku saabsan Barzakh Samsung Recovery
Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga Samsung in LG
Top 5 Manager Android Hawl: Dila Hawlaha iyo dardar Android